काठमाडौं,२२ असार । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति केही दिनभित्रै सार्वजनिक गर्दैछ । ल्याउन लागेका हुन् । गभर्नर डा. चिरंजीबि नेपालले आफ्नो कार्यकालको दोश्रो तथा राष्ट्र बैंकको चौधौँ मौद्रिक नीति ल्याउँदैछन् । गत वर्ष कृषि क्षेत्रमा बैंकिङ लगानी बढाउने, बैंक तथा वित्तीय...
६ विकास बैंकहरु वाणिज्य बैंकहरुमा गाभिँदै काठमाडौँ, २२ असार । नेपाल राष्ट्र बैैंकले तोकेअनुरुप चुक्ता पुँजी पुर्याउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मर्जर र एक्विजिसनलाई प्रमुख आधार बनाएका छन् । यसमध्ये पनि गाभ्ने गाभिने (मर्जर) प्रक्रिया झन्झटिलो लामोसमेत हुने भएकाले बैंकहरू पछिल्लो समय खरिद बिक्री (एक्विजिसन)लाई प्राथमिकता द...
काठमाडौं, २१ असार: बुधबार पुँजी बजारमा कारोबार रकम र नेप्से परिसूचक दुबै ओर्लिएका छन् । बीमा, विकास बैंक, फाइनान्स समूहको सेयर मूल्य घटेपछि बजार झरेको हो । दिनभरमा नेप्से ३.६२ अंकले ओर्लियो भने कारोबार रकम पनि एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँमा सीमित भयो । केही समययता औसत कारोबार रकम एक...
निक्षेप सुरक्षणले माग्यो १५ करोडको लगानी प्रस्ताव
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमले १५ करोड रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव माग गरेको छ । निगमले बैंक तथा फाइनानस कम्पनीहरुलाई एक वर्षीय मुद्दती निक्षेपको रुपमा रकम लगानी गर्न आह्वान गरेको हो । यसै साताभित्र लगानीको प्रस्ताव पेस गर्न निगमले अनुरोध गरेको छ । कस्ता कम्पनिले गर्न पाउँछन् लगानी ?
काठमाडौँ, २१ असार । व्यवस्थापिका–संसद्, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिबाट विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएको छ । सो विधेयकमा परेका संशोधनमा आजको बैठकमा छलफल भई पारित भएको हो । सो विधेयक अब संसद्को मूल बैठकम...
पुनःनिर्माणको लागि अनुदान सम्झौता गर्न गाउँ फर्किदै भूकम्पपीडित
मेलम्ची, २१ असार । भूकम्पपछि बासस्थान गुमाएर राजधानी काठमाडौँ र जिल्ला बाहिर बस्दै आएका भूकम्पपीडित आवास पुनःनिर्माणको लागि अनुदान सम्झौता गर्न यतिबेला आफ्नो गाउँ धाउँदै छन् । भूकम्पपछि थातथलो मेटिएपछि बस्नको निमित्त सुरक्षित बासस्थान खोज्दै सुविधा सम्पन्न मानिने नेपालको राजधानी तथा नजिकको...
१२ करोडको लागतमा मनसुन पूर्वतयारी योजना बन्दै काठमाडौँ, २१ असार । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले सरकारसितको समन्वयमा मनसुन पूर्वतयारी योजना–२०७३ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सम्भावित बाढी, पहिरोजस्ता विपद्को सामना गर्न सोसाइटीले पूर्वतयारी कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्न आफू मातहतका सबै जिल्ला शाखा कार्यालय निर्देशन दिएको छ । हाल...
नेप्से परिसूचक २ दशमलब ३७ अंकले घट्यो
असार २०, काठमाडौं: सोमबार नेप्से परिसूचक २ दशमलव ३ अङ्कले घटेको छ । बजार खुलेको पहिलो कारोबार देखि उकालो लागेको नेप्से परिसूचक १ हजार ७ सय २४ विन्दुमा पुगेर फर्किएको हो । कारोबार शुरु भएको आधा घण्टाको व्यापारमा नेप्से शून्य दशमलव शून्य १४ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय १६ दशमलब...
अर्थसमिति बैठक : राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन प्रतिवेदन पेस
काठमाडौँ, २० असार । व्यवस्थापिका–संसद्अन्तर्गतको अर्थसमितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७१ माथि सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस भएको छ । समितिको आजको बैठकमा सो विधेयकको दफाबार छलफल गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित उपसमितिले समितिमा पेस...
बन्द हड्ताल गर्न निषेध, विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) विधेयक संशोधनसहित संसदमा पेश गरिँदै
काठमाडौं, २० असार । सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल र राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने भएको छ । सरकारले संसदमा पेश गर्न लागेको विधेयकमा बन्द, हड्ताल र राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिवन्ध लगाउने प्रावधान राखिएको हो । संसदबाट फिर्ता भएर आएपछि उद्योग...
सुनको मुल्य बढ्यो !
काठमाडौँ, २० असार | साताको दोस्रो दिन सोमबार सुनचांदीको मूल्य बढेको छ। शुक्रबार प्रति तोला ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँले बढेर प्रति तोला ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको बताएको छ।
त्यस्तै तेजावी सुन प्रति त...
आपूर्तिले चीनसँग इन्धन ल्याउने प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठायो
काठमाडौँ, २० असार । आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल र चीनबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौताबमोजिम पेट्रोलियम पदार्थ खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्बन्धी प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ । गत चैतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका अवसरमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गर्ने र तीन स्थानम...
बन्दै गरेको पुल बाढीले बगाउँदा चार करोडको क्षति
पाल्पा, २० असार । अविरल वर्षाका कारण कालीगण्डकी नदीबाढीले मा आएको बन्दै गरेको पक्की पुल बगाउँदा रु चार करोड बराबरको क्षति पुगेको छ । नवलपरासीको डेढगाउँ र तनहुँको सामुङ भगवतीपुर जोड्ने खर्सानघाटमा बन्दै गरेको पक्की पुल तीन दिनअघि बगाउँदा अहिले काम प्रभावित बनेको छ । तीन दिनसम्म...
नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ अङ्कले घट्यो
असार १९, काठमाडौं: साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ अङ्कले घटेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव २३ प्रतिशतले घटेर १ हजार ७ सय १९ दशमलव २० विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । नेप्सेमा रू. १ अर्ब ८५ करोड बराबरको शेयर कारोबार भएको छ भने रू. १८ खर्ब ५३ अर्बको कुल बजार पूँजीकरण भ...
« 12...83848586878889...9394 »